Bhiyozani ngendlela efanele ngoKhisimusi | News24
Bhiyozani ngendlela efanele ngoKhisimusi
SESIFIKILE leso sikhathi sonyaka lapho abantu bezi jabulisa ngezindlela ezahlukahlukene. UZibandlela (December) ngiwubona uyinyanga ehluke kakhulu kunezinye, ngoba kuningi okwenzakalayo ngalenyanga futhi kuvele kuphithizele ngalendlela exakile. Basuke beqinisile abantu abadala uma bethi izikhathi zamanje azisafani nezakudala, kanjalo nokhisimusi wamanje awusafani neze nowakudala. Ngikhumbula ngisemncane ukuthi uma kuwu Khisimusi sasiswenka sibe bahle siye ezinkonzweni nabangani bethu, sibuye lapho sidle ukudla emakhaya bese sidlulela komakhelwane bonke ngabanye ngabanye, okumnandi wukuthi lokhu sasikuthokozela futhi singaboni lutho olubi ngakho. Kulesi sikhathi samanje akusenziwa lokho uthola abantu bebhiyoza ngenye indlela, angisho ukuthi akulungile ukuzijabulisa ngoba vele uKhisimusi iskhathi sokuthi wonke umuntu ejabule njengoba kusuke kuzelwe indodana kaMariya noJosefa enguJesu Kristo, kodwa uthola abantu bexabana abanye bethukana, omunye aphuze bese ebona ukuthi kungcono ashayele imoto abeke impilo yakhe neya banye engcupheni.
Okubuhlungu wukuthi baningi abantu abashona ngesikhathi sika Khisimusi, iningi labo lishona engozini yemoto, bemuke nolwandle, abanye beshona ngesandla somuntu.
Abe-FEVER banxusa wonke umuntu ukuba azijabulise ngendlela efanele ngoKhisimusi, abantu bagweme izingozi emigwaqeni nezingxabano ezingathi shu! Washo noMfo kaMgiks wathi: “Ungakwenzi komunye umuntu ongeke uthande kwenziwe kuwena. Sonke ake siqinisekise ukuthi lo Khisimusi unokuthula.
Asingomeli ngasemakhaya, asomele emakhaya.
Akungabi khona abazozila ngenxa yokungahloniphi kwakho nokuhlulwa wukudla bese ushayela imoto.
Baphelile abantu bakithi yizingozi zomgwaqo ngenxa yotshwala.
Sengathi oPhezukonke angaba nathi sonke kulo Khisimusi.”
Abe-Fever banifisela uKhisimusi omuhle futhi onokuthula. Sicela usithumele i-sms usichazele ukuthi uzobe wenzani ngoKhisimusi nango-New Year, enombolweni ethi: 074 209 5642 noma uthumele kwikheli le email elithi: nosipho.mkhize@media24.com.
Abe-FEVER banxusa wonke umuntu ukuba azijabulise ngendlela efanele ngoKhisimusi, abantu bagweme
izingozi emigwaqeni nezingxabano